TETIBOLAM-PANJAKANA – LFI 2022: Manokana 713 miliara Ariary ho an’ny sosialy ny Fanjakana – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:26
Nitondra fanazavana ny Minisitra Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.
Accueil/Politika/TETIBOLAM-PANJAKANA – LFI 2022: Manokana 713 miliara Ariary ho an’ny sosialy ny Fanjakana
TETIBOLAM-PANJAKANA – LFI 2022: Manokana 713 miliara Ariary ho an’ny sosialy ny Fanjakana
Mialohan’ny asam-baomiera handinihana amin’ny antsipirihiny ny Volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bola-panjakana ho an’ny taona 2022 dia nanazava amin’ny ankapobeny momba izany Ramatoa Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison omaly faha-18 novambra 2021 teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza. Nisongadina tamin’izany ny fampiakarana ny tetibola natokana ho an’ny sehatry ny sosialy.
Raha 345 miliara ariary ny totalin’ny tetibola natokana ho an’ny sosialimbahoaka tamin’ny taona 2021, ao anatin’ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho an’ny taona 2022 izany dia mitotaly 713 miliara Ariary. Isan’ireo sehatra hahazoana tombony manokana amin’izany ny tontolon’ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny mponina, sy ny rano fisotro madio. Ny sehatry ny fampianarana ambony sy ny sehatra teknika ihany koa hahazo tombony amin’izany satria, raha niainga tamin’ny 156 miliara ariary tamin’ny taona 2021 ny tetibola natokana ho an’ireo sehatra roa ireo, dia niakatra ho 177 miliara ariary izany amin’io taona ho avy io. Antony nampiakarana azy io ny olan’ny vatsim-pianarana izay mateti-piseho isan-taona eny amin’ny Oniversite, hoy ny fanazavana. Ho an’ny Antenimieram-pirenena manokana indray, nakarina ho 79 miliara ariary ny tetibola, taorian’ny filazana fa tsy ampy ny tetibola 54 miliara ariary. Nisy fiakarana koa anatin’io tetibola 2022 io ny fampiakarana ny fanomezana ho an’ny CSB izay nahitana fiakarana hatramin’ny 128%. Hahafahana miatrika izany rehetra izany dia tsy maintsy hatsaraina ny fidiram-bola. Hatsaraina, araka izany, ny vola miditra amin’ny alalan’ny hetra. Nodinihina sy norafetina tao anatin’ny fitsinjovana ny vahoaka malagasy izany tetibola izany, raha ny fantatra, mba hametrahana ny Fanjakana tsara tantana.
Nambaran’ny Minisitra Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison fa anisan’ny manamarika ny fitantanana amin’ny taona ho avy ny fahataperan’ny hamehana ara-pahasalamana ka hamerenana indray ny toekarena sy ny asa amin’ny sehatra rehetra. Misongadina amin’izany ny fanohizana ireo fanavaozana efa natomboka toy ny lalana, ny fananganana fotodrafitrasa, ny fandraisana mpiasa vaovao, ny fanafarana entana fototra ilaina andavanandro, ny fanampiana omen’ny Fanjakana ny rafi-pitantanana sy ny sisa… Notsindriana ny fitsinjovana manokana ny faritra Atsimo, izay nasian’ny Solombavambahoaka Idealson fanamarihana ny tokony hamaritana mazava ilay “Atsimo” voalaza eto. Nanambara ihany koa ny Minisitra fa mila hatsaraina ny fidiram-bola eto Madagasikara. Hovinavinaina ho 5,4% ny fitomboan’ny harinkarena faobe amin’ny taona 2022 raha 3,5 % izany ny taona 2021.
Tsara marihina fa na eo aza ny fanomezana vahana ny sehatry ny sosialy ao anatin’ity tetibola ity dia mbola vaindohan-draharahan’ny Fanjakana hatrany ny hanohy ny ezaka fanarenana ny toekarena. Efa ainga vao hantenaina hitondra fanatsarana ho an’ny sehatry ny toekarena izao io efa fisokafan’ny sisintany io. Mbola laharam-pahamehana koa, etsy ankilany, ny fananganana fotodrafitrasa, izay sady mamorona asa ho an’ireo olona manao izany, no miteraka asa koa ho an’ireo olona hiasa ao anatin’izany rehefa vita.
ANDRIATONGARIVO LALATIANA: « Ny fanajana ny lalàna no fetran’ny demokrasia »
TOERAM-PONENANA: Tsy manara-drafitra avokoa ny 70%-n’ny trano fonenana eto Madagasikara
ANTENIMIERANDOHOLONA: Nolavin’ny Filankevi-panjakana ny fitorian-dRakotovao Rivo sy ny tariny
FIANARANTSOA : Notokanana ny « Galerie Commerciale O’ Matsiatra » ao Antarandolo